ထုံး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရုပ်အဆင်း White to pale yellow/brown powder
သိပ်သည်းမှု 3.34 g/cm3
အရည်ပျော်မှတ် ၂,၆၁၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၄,၇၃၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၂,၈၈၆ ကယ်လ်ဗင်)
ရေဆူမှတ် ၂,၈၅၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၅,၁၆၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၃,၁၂၀ ကယ်လ်ဗင်) (100 hPa)
ပျော်ဝင်မှု in Methanol Insoluble (also in diethyl ether, n-octanol)
အက်စစ် ပါဝင်မှု (pKa) 12.8
ထုံးသည် အဖြူရောင်ရှိသော အစိုင်အခဲဖြစ်၍ ဓာတုဗေဒ အခေါ်ဖြင့် ကယ်လ်ဆီယမ် ကာဘွန်နိတ် (CaCO3) ဟုခေါ်သည်။ ထုံးကျောက်(မြေဖြူဟုလည်းခေါ်သည်) ကို မီးဖိုတွင်ထည့်၍ အပူချိန် ဖာရင်ဟိုက် ၁၈ဝဝ ထိ မီးပြင်းတိုက်ပေးရသည်။
ထိုထုံးကျောက်ကို မီးပြင်းတိုက်လိုက်သောအခါ ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်များ ထွက်သွားပြီးလျှင် မဖောက်ထုံး (ကယ်လ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက် CaO) ဖြစ်လာသည်။ ဓာတုဗေဒ ညီမျှခြင်းဖြင့် CaCO3 = CaO + CO2 ဟု ဖေါ်ပြသည်။ ထိုမဖောက်ထုံးတွင် ရေထည့်လိုက်သောအခါ အလွန်ပူလာပြီး ထုံးသည် ကြေမွသွားကာ ဖောက်ထုံး (ကယ်လဆီယမ် ဟိုက်ဒြောက်ဆိုဒ် Ca(OH)2) ဖြစ်သွားသည်။ ယင်းကို ဓာတုဗေဒ ညီမျှခြင်းဖြင့် CaO + H2O = Ca(OH)2 ဟုဖေါ်ပြသည်။ ရေနှင့် ဖောက်ထုံးပျော်ဝင်ရည်ကို ထုံးရေကြည်ဟုခေါ်သည်။ ထုံးနို့သည် ထုံးရေကြည်နှင့် အရည်မပျော်သော ဖောက်ထုံးအရောဖြစ်သည်။
ထုံးအင်္ဂတေပြုလုပ်လိုသောအခါ မဖောက်ထုံးတွင် ရေထည့် ပြီးနောက် သဲနှင့် ရောစာကျောက်များကို ရော၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖေါက်ထုံးနှင့် သဲကို ရော၍လည်း ထုံးသရိုး အဖြစ် အုတ်စီရန်နှင့် နံရံချောရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုထုံးရောစာ သည် လေထဲမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို စုတ်ယူပြီးလျှင် ထုံးကျောက် (ကယ်လဆီယမ် ကာဗွန်နိတ် CaCO3) အဖြစ် အသွင်ပြောင်းကာ ခြောက်သွားသည့်အခါ အလွန်မာသော အင်္ဂတေကို ရရှိသည်။ ဓာတုဗေဒ ညီမျှခြင်းဖြင့် Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O ဟု ဖေါ်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ထုံးကျောက်မှ ဖေါက်ထုံး၊ ဖေါက်ထုံးမှ ထုံးကျောက်အင်္ဂတေ တပတ်လည်ခြင်းကို ထုံးသံသရာလည်သည်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုပြင် ထုံးသည် သဲမှ ဆီလီကာနှင့်ပေါင်း၍ ကယ်လဆီယမ်ဆီလီကိတ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရွှံ့မှုံ့မှ အလူမီနာနှင့် ပေါင်း၍ ကယ်လ်ဆီယမ် ဆီလီကိတ် အဖြစ်လည်းကောင်း ဓာတ်ပြု အသွင်ပြောင်းသေးသည်။ ထိုပစ္စည်းများက ထုံးအင်္ဂတေကို ပိုမို မာကျောစေသည်။
ယခုအခါ ထုံးအစား ဘိလတ်မြေကိုသာ ပို၍ အသုံးများလာ ကြသည်။ သို့ရာတွင် အဆောက်အအုံ အဟောင်းများ ပြုပြင်ရာတွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်စေရန် ထုံးကို အဓိက အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ထုံးသည် လူ၏ စွက်ဖက်မှုနည်းသော သဘာဝ ဒြပ်စင် တခု ဖြစ်ပြီး သဘာဝနှင့် သဟဇာတ ရှိမှု၊ ကာဘွန်စားရိတ် နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျော့ကျစေရန် ထုံးကို ပြန်လည် အသုံးပြုရန် စိတ်ဝင်စားမှုများ တိုးလာလျက်ရှိသည်။
ထုံးသည် မီးပြင်းကိုခံနိုင်၏။ ထုံးသည် အယ်ကာလီ သတ္တိ အလွန်ပြင်းသောကြောင့် အက်ဆစ်များကို ဓာတ်ပြယ်စေနိုင်သည်။ အယ်ကာလီများတွင် ထုံးသည် ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကော့စတစ်ဆိုဒါ၊ ပိုတက်၊ အသီး အနှံနှင့်အသားများကိုလည်း စားပစ်နိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် အညစ်အကြေးများကို ရှင်းပစ်ရာတွင်လည်း ထုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ထုံးကို အဆောက်အအုံနှင့် လမ်းများဆောက်လုပ်ရာ၌လည်းကောင်း၊ ထုံးဖြူဆေးသုတ်ရာ၌ လည်းကောင်း၊ မြေဩဇာများ ပြုလုပ်ရာ၌ လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင် သားရေနယ်လုပ်ငန်းတွင် သားရေခွံ များမှ အမွေးများ ကျွတ်အောင် ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ထုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဖန်သားများပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ထုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ မြေဆီလွှာတွင် အချဉ်ဓာတ် ပေါက်လာသောအခါ အချဉ်ဓာတ်ပြယ်စေရန်လည်း ထုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ပိုးသတ်ဆေး အများအပြားတွင်လည်း ထုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ ထုံးကို သဲနှင့်ရော၍ အပူပြင်းတိုက်ပေးလျှင် အရည်ပျော်၍ ဖန်ရည်တစ်မျိုး ဖြစ်လာသည်။ ထုံးသည် သတ္တုပစ္စည်းအမြောက်အမြားကို ပျော်ဝင်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သံတွင်းထွက် ပစ္စည်းရိုင်းများမှ သံကို ထုတ်ယူရာတွင် ထုံးကျောက်များကိုထည့်၍ အသုံးပြုကြလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုံးကျောက်ကို နေရာအနှံ့အပြား၌ တွေ့ရပေသည်။ ထုံးကျောက်မှ ထုံးကို ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု အများဆုံးမှာ ဘိလတ်မြေ စက်ရုံကြီးများ ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ ကျိုက်မရောရွာတွင်လည်း ရာသီအလိုက် ထုံးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြစ်ကြီးနား၊ ကျောက်ဆည်၊ ရွှေဘိုနှင့် အောက်ချင်းတွင်းခရိုင်များတွင် ထုံးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Haynes၊ William M., ed. (2011)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.)။ Boca Raton, FL: CRC Press။ p. 4.55။ ISBN 1439855110။
↑ Calciumoxid Archived 30 December 2013 at the Wayback Machine.. GESTIS database
↑ ၃.၀ ၃.၁ Zumdahl, Steven S. (2009)။ Chemical Principles 6th Ed.။ Houghton Mifflin Company။ p. A21။ ISBN 0-618-94690-X။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0093။ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထုံး&oldid=746651" မှ ရယူရန်